Monday June 10, 2019 - 18:32:57 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Waxaa maanta qaar kamid ah maxaabiistii ku xirneyd xabsiga dhaxe ee Xamar loo wareejiyay xabsiga cusub ee dhawaan laga dhisay magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada ciidanka Asluubta.
Xabsiga cusub ee maxaabiista loo wareejiyay ayaa ah xabsi si casri ah loo dhisay, waxaana xabsigan nolol ahaan iyo dhinac waliba ka wanaagsan yahay xabsigii hore ee Xamar oo hada lagu xiro maxaabiista dambiyada kala duwan gasha.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow) ayaa Maanta waxaa uu kormeer ku tegay Xabsiga guud ee Muqdisho oo loo dhisay hab Casri ah.
Kormeerka Guddoomiye Yariisow uu ku gaaray Xabsiga guud ee Muqdisho ayaa waxaa ku wehlinayay Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir,Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko, Taliyaha Ciidamada Asluubta Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Soomaliya.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow) ayaa waxaa uu sheegay in uu ku faraxsanahay in maxaabiista ay helaan xaquuq sare oo leh hoy casri ah,raashin tayo leh iyo waxbarasho isagu jirta.
Isaga oo sii hadlaayay ayuu sheegay in maxaabiistii ugu horreysay ay ku hoyanayaan Xabsiga weyn ee ku dhex yaalla Xarunta Ciidanka Astuubta Soomaaliyeed,kuwaasi Maanta si rasmi ah looga soo wareejiyey Xabsiga dhexe ee Xamar.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow) ayaa tilmaamay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u istaageen xuquuqda muwaadiniinta.
Xabsigan oo dhismihiisa qarash badan ku baxday ayaa si rasmi ah xariga looga jaray sanadkii hore, waxaana xabsigan dowlada Soomaaliya sheegtay in maxaabiista ku heli doonaan dhaqan celin iyo sidoo kale waxbarasho.
Waa Maxaabiistii ugu horeeysay ee la geeyo tan iyo markii la dhigay Xabsiga weyn ee ku dhex yaalla Xarunta Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed,kaasi oo kamid ah Xabsigyada ugu weyn Qaaradda Afrika loona dhisay si Casri ah.